भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको नयाँ सुचि पठायो । अब नेपालले के गर्ला ? - Mero Pradesh
भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको नयाँ सुचि पठायो । अब नेपालले के गर्ला ?
काठमाण्डौं । नेपाल सरकारलाई भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको नयाँ सुचि पठाएको छ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सुचि पठाए संगै नेपाल आयल निगम अन्योलमा परेको छ । भारतले पठाएको नयाँ मुल्य सुचि अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा आयल निगम छलफलमा रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्ने हो भने नेपाल आयल निगम १५ दिनमा झण्डै करीब २ अर्ब ४१ करोड घाटा हुने निगमले जनाएको छ । अन्तर्राट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल आयल निगममा पनी पर्ने देखिएको हो । निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर ९० देखि ९६ प्रति व्यारेल पुगिसकेको जनाएको छ ।
सो अवस्थामा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले बुधबार नयाँ मूल्य पठाएको समेत निगमले जनाएको छ । भारतले पठाएको नयाँ मूल्यमा प्रतिलिटर पेट्रोल ५.६१, डिजेल ५.६२ र हवाई इन्धनमा ४.९५ वृद्धि भएको छ । यो नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाइ पाक्षिक अर्थात १५ दिनमै झण्डै करीब २ अर्ब ४१ करोड घाटा हुने निगमले जनाएको छ ।